October 2012 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Firmware Huawei Phone Application
Huawei Firmware Collection -8 ( G- series )
Maung Pauk at 11:51:00 PM 1
1. Huawei G300 U8818 Firmware
U8818 V100R001C17B890 (China Unicom)
U8818 V100R001C17B892(China Unicom)
Ascend G300-U8818 (Android 4.0) V100R001C17B926(China Unicom)
2.Huawei G300 U8815 Firmware
Ascend G300 (U8815,Android2.3.6)V100R001C29B895-TA
Ascend G300(U8815,Android 2.3.6) V100R001C00B884
Ascend G300(U8815,Android 2.3.6) V100R001C02B885 (UK Vodafone)
Ascend G300(U8815,Android 2.3.6)V100R001C185B894
Ascend G300(U8815,Android2.3.6) V100R001C05B888
Ascend G300-demo-(U8815,Android 2.3.6)V100R001C185B886
အပိုင်း (၉) စောင့်မျှော်ပါရန်
Drivers Phone Application Phone Drivers
Maung Pauk at 11:34:00 PM 5
Mobile Phone သမားတွေအတွက် Computer နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါ တကယ်လိုအပ်တဲ့ Driver တွေပါ..
အခုက Root လုပ်ကြတယ်.. Jailbreak လုပ်ကြတယ်.. ဒီတော့ ကိုယ့်ဖုန်းကို ကိုယ့်ကွန်ပျူတာက သိဖို့ လိုမှာပေါ့... အောက်မှာ အမျိုးအစားအလိုက်တင်ပေးတယ်ပါတယ်...
2.Android ADB Driver
3.Android Handset USB Driver
ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေနိုင်သော အန္တရာယ်များ ဟန်းဖုန်း ၁၀ လုံး
Maung Pauk at 3:09:00 PM 0
ဟန်းဖုန်းက လူကို ဘယ်လို ကျန်းမာရေး ထိခိုက်တယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူ တော်တော်များများ သိရှိပြီး ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အဓိက ထိခိုက်စေတာက ဦးနှောက် ဖြစ်ပြီး ဖုန်းက ထုတ်လွတ်တဲ့ ရေဒီယို လိုင်း ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း radiation ကြောင့်ပဲ ဖုန်းကို သထိထား သုံးဖို့ မှာကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဆေးပညာရှင်နဲ့ Scientist များက အတူတူလေ့လာပြီး Spe cific Absorption Rate (SAR) သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- တစ်ယူနစ်ကို ရေဒီယိုလိုင်း ဘယ်လောက်ထိ ထုတ်လွတ်ပြီး လူဦးနှောက်ထဲကို ဘယ်လောက် ဆုတ်ယူ (adsorb) လုပ်စေ တာမျိုးကို ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု SAR ယူနစ်ကတော့ တစ်ကီလိုဂရမ်စာ ဖုန်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်း အလေးချိန်ဟာ လျှပ်စစ်လှိုင်း/ ရေဒီယိုလှိုင်း ဘယ် နှစ်ဝပ် ထုတ်နီုင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - 1.5 watts/kg ဆိုရင် တစ်ကီလိုဂရမ် ယူနစ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁.၅ ဆိုရင် အတော်များနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အန္တရာယ်များတဲ့ ၁.၅ အထက် မိုဘိုင်းဖုန်းများကို စာဖတ်သူတို့ သိရှိအောင် မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
၁၀။ Motorola W385
အမေရိကန် မိုတိုရိုလာက ထုတ်တဲ့ CDMA ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ရယ်လို့ မဟုတ်ပဲ တရုတ်ပြည်က စက်ရုံခွဲမှာလည်း ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ တော်တော်ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ ခေါက်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဒီယိုလှိုင်း ဆုပ်ယူနိုင်မှု ယူနစ် Specific Absorption Rate (SAR)- တစ်ကီလိုဂရမ်မှာ ၁.၅၄ ဝပ် အထိ ရှိပါတယ်။
၉။ HTC Magic
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ထုတ်တဲ့ ထိုင်ဝမ် HTC ထုတ် စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ Android 1.6 Donut ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး သူ့ခေတ် သူ့ခါမှာတော့ တော်တော်ကို ပေါက်တဲ့ ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့  SAR ကလည်း တစ်ကီလိုဂရမ်ကို ၁.၅၅ ဝပ် အထိ ရှိပါတယ်။
၈။ Motorola i335
၂၀၀၅ ခုနှစ်က တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က တစ်ကြိမ်ထုတ်လုပ်ရအောင် အတော်ကို အောင်မြင်တဲ့ ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်းဆွဲအား အင်မတန် ကောင်းပြီး ဘက်ထရီတော်တော်ခံတဲ့ ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူ့ရဲ့  SAR က ၁.၅၅ ရှိပါတယ်။
၇။ Blackberry Bold
ကနေဒါ RIM ထုတ်တဲ့ Blackberry ဖုန်းလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ Bold စီးရီး တစ်ခုလုံးလို့တော့ မဆိုထားပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ မော်ဒယ်တွေကို အသားပေးပြောထားပါတယ်။ ၁.၅၅ အထိ radiation rate ရှိနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Blackberry ကလည်း မြန်မာပြည်မှာ ရေပန်းစား တဲ့ ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ Motorola Boost
Android 1.5 သုံးပြီး keypad ရော၊ Touchscreen ပါတဲ့ Motorola Boost ကလည်း နာမည်ကြီးဖုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာကလည်း 5megapixel ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူ့ရဲ့  SAR rating ကလည်း ၁.၅၅ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ Kyocera Jax S1300
ဒီဂျစ်တယ် ဖုန်းအဆင့်ပဲ ရှိတဲ့ Kyocera Jax S1300 ကိုတော့ လူသိနည်းပါတယ်။ လိုင်းဆွဲအားကောင်းမှုကို အဓိကထားထုတ်တဲ့ ခပ်ရှင်းရှင်း ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁.၅၅ ရှိတဲ့အတွက် SAR rate ကတော့ မသေးပါဘူး။
၄။ Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro
၂၀၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ နောက်ပိုင်းထွက်ရှိတဲ့ ဖုန်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာလည်း အသုံးများနေပါတယ်။ Sony Ericsson Xperia X10 Mini မဟုတ်ပဲ ဗားရှင်း နည်းနည်း Upgarde လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် Pro လို့ ထပ်ဖြည့် အမည်ပေး ထားတဲ့ ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ Android စမတ်ဖုန်းကောင်း တစ်မျိုး ဖြစ်ပေမယ့် SAR rate ကတော့ ၁.၅၅ ရှိပါတယ်။
၃။ Sony Ericsson Satio
Symbian OS 9.4 နဲ့ ထွက်ရှိတဲ့ ဆိုနီရဲ့  Ericsson Satio လည်း မြန်မာပြည်မှာ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ GSM ဖုန်း ဖြစ်ပြီး Wi-Fi, bluetooth စုံလင်စွာ ပါရှိတဲ့အတွက် အကြိုက်တွေ့နေကြသေးတဲ့ ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့  SAR ကလည်း ၁.၅၆ အထိ ရှိပါတယ်။
၂။ Motorola Droid2Global
သြဂုတ် ၂၀၁၀ လေးတင် ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Android 2.2 စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ Droid2လို့လည်း လူသိများပါတယ်။ user interface ကောင်းမွန်မှု၊ ကင်မရာနဲ့အခြား touchscreen နည်းပညာတို့ ကောင်းမွန်မှုကြောင့် အကြိုက်တွေ့ နေကြသေးတဲ့ ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ SAR ကတော့ ၁.၅၈ အဆင့်အထိ ရှိပါတယ်။
၁။ Motorola Bravo
Motorla Bravo ဆိုတာကလည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ WVGA display သုံး စမတ်ဖုန်းသေးလေး ဖြစ်ပါတယ်။ Android ဖုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Processor ကောင်းမွန်မှု၊ အကြမ်းခံမှုတို့က အားသာ ချက် ဖြစ်ပေမယ့် အဓိကား အားနည်းချက်ကြီးကတော့ ရေဒီယို လှိုင်း ထုတ်လွင့်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ သူ့ကို အန္တရာယ်အကြီးဆုံး နံပါတ် ၁ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ SAR rating - ၁.၅၉ ရှိတဲ့အတွက် လက်ရှောင်ရန် တိုက်တွန်းထားတဲ့ ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ အဓိက ဇာတ်ကောင်က Motorola ဖြစ်ပြီး Motorola ထုတ်ဖုန်း တွေ တော်တော်ပါနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အထက် ၁၀လုံးကို လေ့ လာသိရှိပြီး စာဖတ်သူတို့ သတိထား အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်။
-- Ref: gizmocrazed.com အောင်ခမ်း (TSJ team) http://techspacejournal.blogspot.com/2012/10/blog-post_6372.html
Huawei Firmware Collection -10 ( C - Series )
Maung Pauk at 2:49:00 PM 4
1. Huawei C8150 Firmware
C8150-1 V100R001C126B837(Indonesia AHA)
2. Huawei C8500 Firmware
3. Huawei C8500S Firmware
C8500S V100R001C92B656 (China Telecom)
4.Huawei C8511 Firmware
5. Huawei C8550 Firmware
6. Huawei C8600 Firmware
7. Huawei C8650 Firmware
C8650 (Android 2.3.3)V100R001C92B829(China Telecom)(05010MHJ)
C8650 (Android 2.3.3)V100R001C92B855(China Telecom)(05010MHJ)
C8650 (Android 2.3.3)V100R001C92B860(China Telecom)(05010MHJ)
C8650 (Android 2.3.3)V100R001C92B863(China Telecom)(05010MHJ)
C8650 (Android 2.3.3)V100R001C92B867(China Telecom)(05010MHJ)
C8650 (Android 2.3.3)V100R001C92B879(China Telecom)(05010MHJ)
8. Huawei C8650Plus Firmware
9. Huawei C8800 Firmware
10. Huawei C8850 Firmware
11. Huawei C8860E Firmware
C8860E V100R001C92B892(China Telecom)
C8860E V100R001C92B925(China Telecom)
Code IT Knowledge
Maung Pauk at 2:22:00 PM 5
ကျွန်တော် Android Phone ကိုင်ဆောင်သူတွေအတွက် လျှို့ဝှက်ကုဒ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
( မှတ်ချက် ။ ။ ANDROID PHONE တိုင်းတွင်ရသည်ဟူ၍မဟုတ်၊ တချို့ဖုန်းများ ကုဒ်နံပါတ်နှင့် အဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ )
1. Testလုပ်ရန် ကုဒ်များ
*#*#0673#*#* (or) *#*#0289#*#* – Melody test
*#*#232337#*# - Bluetooth device address ကိုပြခြင်း
*#*#232338#*#* –WiFi MAC address ကိုပြန်ချင်း
*#*#1575#*#* - အခြား GPS test
2. Firmware အချက်အလက်ကြည့်ခြင်း
3. Backup လုပ်ရန် ကုဒ်
5. End Call / Power button ပြောင်းလဲခြင်း
6. Reset လုပ်ခြင်း
*2767*3855# – Factroy setting သို့ ပြန်လည် Rest လုပ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းကုဒ်ကို
အသုံးပြုလျှင် file များ၊ setting များ ပြတ်ကုန်ပါမည်။
*#*#7780#*#* - Factory Data reset လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ဖုန်းထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသော Google Account setting များ၊ Downloa လုပ်ထားသော Application များ၊ system နှင့် application data နှင့် Setting များကို ဖျက်ပစ်ပါသည်။
7. ဖုန်း၏ information ကြည့်ရှုရန်
*#*#4636#*#*- battery information, battery history, phone information, usage statistics
ကျွန်တော် သိသလောက်၊ တတ်သလောက်လေး ပြန် Share ပေးထားတာပါ။ အမှားပါရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပါ။
Source : ANDROID PALACE
Maung Pauk at 2:10:00 PM 0
27.10.2012 ရက်နေ့ညက မောင်ပေါက်ရဲ့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် လက်ကမြင်းမှုကြောင့် www.maungpauk.co.cc ဆိုတဲ့ Domain Name လေး အဖတ်ဆယ်မရအောင် ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ..
ကျွန်တော်က maungpauk@gmail.com နဲ့လုပ်ထားတာဆိုတော့ maungpauk နာမည်ကို မူပိုင် ဖြစ်ချင်တာကိုးဗျ.. ဒါပေမယ့် maungpauk.blogspot.com က ဆရာသမားတစ်ယောက်က ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ ၂၀၀၈ ကတည်းက လုပ်ထားတာ.. ဆက်လည်းမရေးဘူး.. ကျွန်တော်လည်းမရဘူးဗျ..
komaungpauk.blogspot.com ပဲရတယ်.. နာမည်ကရှည်တယ်လေနှော.. အဲဒါနဲ့ co.cc မှာ လျှောက်လုပ်ရင်းက maungpauk.co.cc ကိုရတာ 23.8.2012 ရက်နေ့က ပါ.. ကျွန်တော်လည်း နောက်နှစ် ၈ လပိုင်းကျရင် co.cc ကို ပိုက်ပိုက်မပေးဘဲ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲလို့ အကြံအိုက်နေတုန်း komaungpauk.blogspot.com ဆိုတဲ့ နာမည်ရှည်ကြီးကို တိုအောင်လုပ်ကြည့်ရာကနေ ချိတ်ထားတဲ့ maungpauk.co.cc လည်းပျက်ပါလေရော.. စိတ်ညစ်လိုက်တာဗျာ..4နာရီထိ အိမ်မပြန်နိုင်ဘူးခင်ဗျ... မရတဲ့အဆုံး.. နဂိုမူရင်း komaungpauk.blogspot.com နဲ့ပဲ ကျေနပ်လိုက်ရတယ်.. အဲလိုဖြစ်နေတာကို သိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အားပေးရှာပါတယ်.. ကလိတာကိုး ခံလေ. တဲ့..( အောင်‌လေးကလေ)
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ရဲ့ လျှာရှည်မှုကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ www.maungpauk.co.cc ကို နှမြောမနေဘဲ အကျိုးရှိတဲ့ပို့စ်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဆက်ရေးနေမယ်ဆိုရင်.. အကျိုးရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း..
ဒီနေ့တော့ အဆင်ပြေပါစေလို့ မပြောနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်မှ အဆင်မပြေတာ...
နောက်တော့ maungpauk.com လည်းဘာလေး ၀ယ်နိုင်ရင် တော့ အကောင်းသားနှော..
ဒညင်းသီး အရမ်းကြိုက် တဲ့ ကိုကို မမ တို့ သတိထားဖို့ ပါ။
Maung Pauk at 2:00:00 PM 0
ဒီတစ်ခါတော. ကျန်းမာရေးအကြောင်း ကျနော်ဖတ်ဖူးတာလေး မျှဝေချင်ပါတယ်။ အစားအသောက်တွေထဲက အသီးတစ်မျိုးရဲ.အကြောင်းပါ။ ဒီအသီးကို တော်တော်များများစားဖူးကြပါတယ်။ ထမင်းဝိုင်းတွေမှာ အတို.အမြှုပ်အဖြစ်စားကြ၊ ကြိုက်ကြပါတယ်။ တကယ်ကျတော. ဆေးပညာအနေနဲ.ဆိုရင် ဒီအသီးကို မစားသင့်ဘူးဆိုတာ စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်မိပြီးသိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြန်ပြီးမျှဝေ လိုက်ပါတယ်။
အားလုံးသိကြတဲ.အသီးပါပဲ။ ကြိုက်တဲ.လူလည်း တော်တော်များမယ်ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင်. အမျိုးသမီးတွေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော. တညင်းသီးပါ။ တညင်းသီးကို English လို Djenkol Bean လို.ခေါ်ပြီး၊ သူ.ရဲ.Scientific name ကတော. Pithecolobium -lobatum လို.ဆိုပါတယ်။ တညင်းသီးမှာ လူကိုအကျိုးပြုတဲ. ဗီတာမင်ဓာတ်ပါဝင်မှု မရှိပါဘူး။ သူ.မှာ ပါဝင်တာကတော. လူကို ဒုက္ခပေး နိုင်တဲ. အဆိပ်ဓာတ်ပါ။ တညင်းသီးမှာ Djenkolic acid ဆိုတဲ. အဆိပ်တွေ ၀.၃% ကနေ
၁.၃% အထိပါဝင်ပါတယ်။ တညင်းသီးဟာ အဆိပ်သင့်တတ်တဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တညင်းသီးအဆိပ်သင်.တာကို Djenkilism လို.ခေါ်ပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးကတော. ကျောက်ကပ်
နှစ်ခုစလုံး တစ်ပြိုင်နက်ပျက်စီးပြီး အသက်ဆုံးရှုံးတဲ.အထိ ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တညင်သီးပေါတဲ.့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ရွေကျင်နဲ. သံတောင်ကြီးဒေသတွေမှာ တညင်းသီးအဆိပ်သင်.မှု အများဆုံးတွေ.ရပါတယ်။
ရာသီမှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် အဆိပ်သင်.မှုကြောင်. အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိပါတယ်။ အထူး
သဖြင်. အဆိပ်သင့်တဲ့အခါ ဆေးရုံ တက်ရောက်ပြီး စနစ်တကျကုသမှု မခံယူရင်သေဆုံးဖို.လမ်း
တညင်းသီးအဆိပ်ရဲ. ဖွဲ.စည်းပုံမော်လီကျုးကတော. အပ်ချောင်းပုံလေးတွေကို ပုတီးသီသလိုသီထားတဲ.ပုံဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်ရှည်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွယ်တကူချိတ်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို.ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆိပ်တွေဝင်လာရင်အသည်းကပျက်ပြယ်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ ကျောက်ကပ် ကတော. ခန္ဓာကိုယ်က အညစ်အကြေးတွေကို စွန်.ထုတ်ပေးပါတယ်။ တညင်းသီးစားလိုက်ရင်ပါဝင်တဲ့ အဆိပ်တွေဟာ သွေးထဲကို အရင်ရောက်သွားပါတယ်။ ပြီးတဲ.အခါ အသည်းကိုရောက်ပါတယ်။ အသည်းဟာ ခန္ဓာကိုထဲကို ရောက်လာတဲ.အဆိပ်တွေကို ပျက်ပြယ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့်
ဆီးပြွန်ငယ်လေးတွေ ပိတ်ဆို.တတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအပ်ချောင်းပုံအဆိပ်မော်လီကျုးတွေကထိုးလို. သွေးကြောလေးတွေ
ပေါက်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဆီးသွားရင် သွေးပါတာ၊ ဆီးသွားနည်းတာတွေ ဖြစ်လာပါမယ်။ ပိုပြီးဆိုးလာတဲ.အခါဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ပြီး ဆီး လုံးဝသွားလို.မရဖြစ်လာပါမယ်။
ကျောက်ကပ်နှစ်ခုစလုံးက ဆီးမထွက်နိုင်လို. တင်းလာပြီး မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျင်လာပါမယ်။
သွေးထဲမှာ Urea နဲ. အဆိပ်အတောက်တွေများလာပြီး ဆေးရုံကိုအချိန်မီ တက်ရောက်ကုသမှုမခံယူရင် အသက်သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ရုတ်တရက် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း(Acute renal failure) လို.ခေါ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်သန်.စင်စက် (Renal dialysis) နဲ. အချိန်မီကုသ နိုင်မှသာ
တညင်းသီးမှာပါတဲ. အဆိပ်ဓာတ်ဟာ ရေမှာအနည်းငယ်သာ ပျော်ဝင်တဲ.အဆိပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ဝင်နှုန်းက၀.၅%သာဖြစ်
ပါတယ်။တညင်းသီးကို ပြုတ်လိုက်ရင် အဆိပ်ဓာတ်နည်းနည်းသာ ပျော်ဝင်ပြီးပြည်.၀သွားတဲ.အတွက် အဆိပ်တွေထပ်ပြီးမပျော်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင်. ရေနဲ.ပြုတ်တဲ.အခါ တစ်ကြိမ်တည်းနဲ.မလုံလောက်ပါဘူး။ အနည်းဆုံး သုံးကြိမ်မှ ငါးကြိမ်ထိ ရေများများနဲ. ပြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြုတ်ပြီတဲ. ရေတွေကိုလည်း သွန်ပစ်ပြီး ရေအသစ်နဲ. ထပ်ပြုတ်ရမှာပါ။ဒါဆိုရင်တော. အန္တရယ်တော်တော်လျော.သွားမှာပါ။ တညင်းသီးအဆိပ်ဟာ 300ֹC ကျော်မှသာ ဓာတ်ပြယ်ပျက်စီးပါတယ်။ ရေဆူမှတ်ဟာ 100ֹC သာရှိတာကြောင့်ဘယ်လိုမှဓာတ်မပြယ်နိုင်ပါဘူး။ တကယ်လို.များ မီးဖုတ်ပြီးစားရင် အဆိပ်တွေဟာ ဓာတ်လည်းမပြယ်၊ အပြင်လည်းမရောက်တော. 100% ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်ပြီး ဒုက္ခပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တညင်းသီးကို ဆားရည်မှာ ကြာကြာစိမ်ပြီးစာရင်တော. အဆိပ်တွေတော်တော်လေး လျော့နည်းသွား တယ်လို.ဆိုပါတယ်။ တညင်းသီး အဆိပ်ဟာ ဆားရည်မှာအလွယ်တကူ ပျော်ဝင်ပါတယ်။
သိပ္ပံနည်းအရ pH များလေလေ ပျော်ဝင်မှု Solubility များလေလေဖြစ်ပါတယ်။
တညင်းသီးစားပြီးတဲ.အခါ ပါးစပ်မှာနံနေတာ၊ ဆီးသွားရင် အနံ.ဆိုးတာတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်တွေဝင်နေပြီလို.ဆိုလိုတာပါပဲ။ တညင်းသီးအဆိပ်နဲ. ပတ်သက်ပြီး WHO(1970),South East Journal of Tropical Medicine(1978)စသဖြင့်ထုတ်ပြန်ရေးသားထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်
ဒါကြောင်. စားပြီးရင် ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း ဒုက္ခပေးသလို အိမ်သာထဲမှာလည်း အနံ.ဆိုးပေးတဲ. ဒီလို
အသီးကို အားလုံး တတ်နိုင်သမျှတော့ မစားသင့်ဘူးလို.ထင်ပါတယ်။
FAME ၏ ကျန်းမာသုတအစီအစဉ်မှ သိသမျှ မျှဝေ ဖော်ပြပါသည်။
shared by >>>http://natureenergycare.blogspot.com/2012/10/blog-post_2038.html#more
(၇) ရက်အမြန်အဆီချနည်း .........
Maung Pauk at 1:55:00 PM 0
ပိန်မပိန်တော့ မသိဘူးနှော်.. စာစောင်တစ်ခုမှာတွေ့လို့ ကူးထားတာကြာပြီ..
အခုမှ ပြန်တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ..
အသီးအရွက်တွေကို အနေတော်တုံးပြီး အိုးထဲရေမြုတ်အောင်ထည့် အဖုံးဖုံးပြီး ပွက်ပွက်ဆူအနေအထားမှာ ၁၀မိနစ်ထား နောက်မှမီးကို လျော့ပြီးအသီးအရွက်နူးတဲ့အထိ ချက်၇ပါမယ်...
အဲဒီအရည်တွေကို ၀ိတ်ချတဲ့ တစ်ပတ်လုံးသောက်၇ပါမယ်...
ကျွန်တော် ကတော့ အရည်ဘဲစစ်သောက်ဖြစ်တယ်... ပုံမှန်ဆို တစ်ပတ်ကို ၁၀ ပေါင်ကျပေမယ့်... အရွက်တွေမစားတာရော လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တာရောကြောင့် ၅ ပေါင်ဘဲကျပါတယ်...
အနံ့အရသာ၇ှိစေဖို့ ဆား င၇ုပ်ကောင်း ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေထည့်နိုင်ပါတယ်
အဆီကျဟင်းရည်ကို ဗိုက်ဆာတိုင်းသောက်ပါ တွဲဖက်စားလို့၇တဲ့အစာတွေက လိမော်သီး ပန်းသီး သစ်တော်သီး
မာလကာသီး ကျွဲကောသီး ကျန်တာ ဘာမှစားခွင့်မ၇ှိပါဘူး....အသီးတွေဘဲစားလို့၇ပါမယ်...
ပင်တိုင်အဆီကျဟင်းရည်အပြင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အားလုံး အစိမ်းဖြစ်ဖြစ်
သစ်သီးကို စားခွင့်မရှိပါဘူး ကင်ထားတဲ့ အာလူးကြီး တစ်လုံး စားခွင့်ပြုပါတယ်
ပထမနေ့နဲ့ ဒုတိယနေ့က ခွင့်ပြုထားတဲ့ အစာတွေအားလုံးစားလို့ရပါတယ်....အာလူးကင်မပါ...
အဆီကျဟင်းရည်အပြင် တစ်နေ့လုံးအတွက် ငှက်ပျောသီးရှစ်လုံး အဆီထုတ်ထားတဲ့ နွားနို့ ကြိုက်သလောက်သောက်ခွင့်ရှိပါတယ်...
ငှက်ပျောသီးနဲ့နွားနို့ မဖြစ်မနေသောက်၇ပါမယ် ကိုယ်ထဲက ပိုတက်ဆီယမ် ပရိုတင်းနဲ့ ကယ်လ်စီယမ်တို့လိုအပ်နေပြီမို့ပါ
ပင်တိုင်အဆီကျဟင်းရည်အပြင် ၁၀ ၂၀ အောင်စရှိ ငါး သို့မဟုတ် အမဲသား ဆိတ်သားဆို အဆီမပါ ကြက်သားဆို၇င် အရေပြားဆုတ်ပြီးသား ကို ဆီမပါတဲ့နည်းနဲ့ ကင်ပြီး စားလို့ရပါတယ် ငံပြာရည် ဆနွင်း ဆား သုံးလို့၇ပါတယ်
ခရမ်းချဉ်သီးခြောက်လုံး အထိတွဲဖက်ပြီး ကြက်သွန်နဲ့သုပ်ပြီးဖြစ်ဖြစ် သူ့ကြီးဖြစ်ဖြစ်စားလို့၇ပါတယ်...ကိုယ်ထဲက Uric Acid တွေကို ဆေးချဖို့ ဒီနေ့မှာ ရေ အနည်းဆုံး ရှစ်ဖန်ခွက် သောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်
ပင်တိုင်အဆီကျဟင်းရည်အပြင် အဆီလွတ်အသားများကင်ပြီးဖြစ်ဖြစ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ရောပြုတ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်
နောက်ဆုံးနေ့မှာ ဆန်လုံးညိုစားခွင့်ပြုပါတယ် ၀ယ်ရခက်ရင် ပေါင်မုန့်ကြမ်းကို အာသာပြေ၇ုံ စားခွင့်၇ှိပါတယ် အချိုဓါတ်မပါတဲ့ သစ်သီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ကြိုက်သလောက်စားခွင့်ပြုပါတယ် ဟင်းရည်ကိုတော့ သောက်ပေး၇ပါမယ်...
ကဲ.. အဆင်ပြေပြေ ပိန်ကြပါစေဗျာ...
Maung Pauk at 1:46:00 PM 0
ခရမ်းချဉ်သီးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ မရှိမဖြစ် ဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်.. မီးဖုတ်ပြီးသုပ်စားကြသလို အစိမ်းသုပ်လည်းစားကြပါသေးတယ်.. ဟင်းချက်ရာမှာတော့ သူမပါရင် မပြီးဘူးခင်ဗျ.. ဒီတော့ ဒီခရမ်းချဉ်သီးကို ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်စားသုံးခြင်းဟာ ဘာအကျိုးများရနိုင်ပါသလဲ..
ခရမ်းချဉ်သီးကို ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေ အမြဲစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးဟာ ဆေးလိပ်ကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ကိုယ်တွင်းဆုံးရှုံးမှုများ၊ ဘေးဘယာများကို နည်းပါးပျောက်ကင်းအောင် စွမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးထဲက ခလိုရိုဂျင်နင် (Chrologenic) နဲ့ ကူမာအစ် (Coumaric) အက်ဆစ်ဟာ အဆုတ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးမယ့် ဘေးကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ခရမ်းချဉ်သီးမှာ ခရိုမီယမ် သတ္တုဓာတ်တွေ အများအပြား ပါဝင်တာမို့ ဆီးချို မဖြစ်အောင် ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးထဲက ဗီတာမင်အေဓာတ်ကြောင့် မျက်လုံးအမြင်အာရုံကိုလည်း တိုးတက် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ မျက်လုံးအရောင် မကြည်တာကအစ ညဘက်အမြင် အာရုံအားနည်းတာတွေကိုပါ ပိုပြီး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာစေပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးထဲက ဗီတာမင်ဘီနဲ့ ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်ဟာ သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ ကိုလက်စထရော အနေအထားကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှလုံးရုတ်တရက်လေရိုက်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းများ ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးဟာ ကင်ဆာရောဂါ အတော်များများကို နှိမ်နှင်းနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက် ၇၂ ခုအရ ခရမ်းချဉ်သီးကို အစိမ်းလိုက်၊ ချက်ပြုတ်ပြီးစားတဲ့သူရော၊ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့စားသောက်ကုန်များကို စားသုံးတဲ့သူတွေဟာ ကင်ဆာ ရောဂါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်လေးကို နှိမ်နှင်းကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိကြတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ အဲဒီ့ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းဟာ ခရမ်းချဉ်သီးထဲက Lycopene ဓာတ်ပေါ်မူတည်နေပါတယ်။ အဲဒီ့ဓာတ်ဟာ ခရမ်းချဉ်သီးကို နီရဲအောင် လုပ်ပေးတဲ့ဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အစာအိမ်ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို သတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခရမ်းချဉ်သီးကို အစိမ်းထက်ချက်ပြုတ်ပြီး စားသုံးတာဟာ Lycopene ဓာတ်တွေ ပိုပြီး ထုတ်လုပ်ပေးတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ လိုင်ကိုပိန်းဟာ ကင်ဆာရောဂါတွေကို သာမက အရည်ပြားအတွက် အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့ရောင်ခြည်တွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ပြီး ယောက်ျားလေးမျိုးဆက် ပြန့်ပွားခြင်းကို အထောက်အပံ့ ပေးပါတယ်။ သိသိသာသာ အစွမ်းပြတဲ့အချက်ကတော့ အဆုတ်နဲ့ အစာအိမ်ဘေးကင်းကျန်းမာစေဖို့ ကောင်းကောင်း အထောက်အကူ ပြုပေးပါတယ်။
တချို့ပျိုလေးတွေရဲ့ ပါးလေးတွေဟာ နီးမြန်းပြီး နှင်းဆီရောင် သမ်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ချင်ရင် ခရမ်းချဉ်သီးကို များများစားပေးပါ။ ပါးပြင်ကို ပန်းနုရောင် သမ်းရုံမျှမက အသားရည်ကို ရွှန်းစိုဝင်းလဲ့စေပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးကို ဒီအတိုင်း စားပေးရင် ပါးပြင် ပန်းနုရောင်သန်းရုံမျှမက မျက်လုံး၊ သွား၊ အရည်ပြားတွေပါ ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
အိပ်ရာမဝင်ခင်နဲ့ အိပ်ရာထပြီး ဆယ်ငါးမိနစ်၊ စုစုပေါင်း တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀ လောက် အချိန်ပေးရင် ရပါပြီ။ အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ မျက်နှာကို ခရမ်းချဉ်သီးတစ်ဝက်နဲ့ (တစ်လုံးကို လှီးပြီး) မျက်နှာကို ပွတ်သပ်ပေးပါ။ လည်ပင်းတစ်ဝိုက်နေရာတွေကိုပါ ပွတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ဆယ်ငါးမိနစ်ခန့်ထားပြီး ရေနဲ့ ပြန်ဆေးပေးပါ။ မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် လုပ်ပေးပါ။ မျက်နှာကို သန့်စင်ဝင်းပစေပါတယ်။
ပျားရည်နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးဟာ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရည်အတွက် အရမ်းကို ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ပစ္စည်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျားရည်တစ်ဇွန်း(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း) နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး အလတ်စား အရွယ်တစ်လုံးကို ယူပြီးရောစပ်ချေနှယ်ပေးပါ။ ပြီးရင် အဲဒီ့ ပျားရည်ရော ခရမ်းချဉ်သီးရည်ကို မျက်လုံးကလွဲပြီး မျက်နှာအပြင် အနှံ့လိမ်းပေးပါ။ လိမ်းပြီး အသားထဲ စိမ့်ဝင်သွားအောင် ၁၅ မိနစ်ခန့် စောင့်ဆိုင်းပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်ပြည့်မှ ရေနဲ့ ပြန်ဆေးပေးပါ။ နှစ်ပတ်လောက် လုပ်ကြည့်တာနဲ့ သိသာလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့ သူများအနေနဲ့တော့ မသုံးပါနဲ့။
ရေနွေးပူလောင်လို့ ဘေးနားမှာတစ်ခုခုနဲ့ သက်သာအောင် လုပ်စရာပစ္စည်း၊ ဆေးဝါးမရှိရင် ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ အုပ်ထားပေးပါ။ အပူသက်သာစေပါတယ်။ အမြန်ဆုံး သက်သာ ပျောက်ကင်း စေပါတယ်။ ဝက်ခြံကိုလည်း ပြေလျော့စေပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ခေါင်းက ဆံပင်ရဲ့ အနံ့ဟာ ဆိုးရွားနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အခါမျိုးမှာ ခရမ်းချဉ်သီးအရည်နဲ့ ခေါင်းကို လိမ်းပြီး မိနစ်ငါးဆယ်လောက်ထားပြီး ရေနဲ့ ပြန်လျှော်လိုက်ရင် အနံ့အသက်လည်း ကင်းပြီး ဒက်တွေပါ ပျောက်ကင်းသွားစေပါတယ်။ နောက်ပြီး ဗီတာမင်အေ ပါဝင်တာမို့ ဆံသားကို တောက်ပြောက်သန်မာစေပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေဖို့ အတွက် စားသင့်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို သုတေသီတွေက လေ့လာ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပေမယ့်. . တကယ်တမ်းမှာတော့ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးဝင်တဲ့ အစားအသောက်ဆိုတာ ရှားပါတယ်. . . ဒါပေမယ့် . . . အဲဒီအစားအစာတွေထဲမှာ ခရမ်းချဉ်သီး စားပေးတာက ကိုယ်ခန္ဓာသွယ်လျဖို့ အတွက် တကယ်ကို ထိရောက် အသုံးဝင်ပါတယ်. .
* ခရမ်းချဉ်သီးဟာ ဗိုက်ပြည့်စေပြီး သရေစာ စားချင်စိတ်ကို ချိုးနှိမ်ပေးပါတယ်..
* ခရမ်းချဉ်သီးမှာ အစာ စားချင်စိတ် ဖြစ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းကို ပြောင်းလဲစေတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေ ပါဝင်နေပါတယ်.
* အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် ၃၅ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးတွေကို လေ့လာမှုအရ ခရမ်းချဉ်သီး ညှပ်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်စားသူတွေဟာ. . . ခရမ်းချဉ်သီး မပါတဲ့ ပေါင်မုန့်စားသူတွေထက် စိတ်ကျေနပ်မှု ပိုရကာ နောက်ထပ် အစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းသွားကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိရပါတယ်.
* တခြား လေ့လာ မှုတစ်ခုအရ ခရမ်းချဉ်သီးမျာ အစာ စားချင်စိတ်ကို ထိ်န်းချုပ်ထားတဲ့ ဟော်မုန်း Ghrelin ပမာဏာကို ပြောင်းလဲစေတဲ့ အာနိသင်ပါဝင်ကြောင်း သိရပါတယ်. . .
* ခရမ်းချဉ်သီးမှာ ပါဝင်တဲ့ လိုင်ကိုပင်းဓာတ်ကလည်း ကင်ဆာလျော့ကျစေခြင်း ၊ မျိုးပွား နိုင်စွမ်းအားကောင်းခြင်း စတဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိစေပါတယ်.
* ခရမ်းချဉ်သီးမှာ ဗီတာမင်စီ ပေါကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် အနာကျက်နှုန်း မြန်စေခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ သံဓာတ်စုပ်ယူအားကောင်း ခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်း ရရှိစေပါတယ်. .
ဒါကြောင့် ခရမ်းချဉ်သီးကို ကိုယ်ခန္ဓာ သွယ်လျလှပစေဖို့အတွက် စားပေးပါက တခြား ကျန်းမာရေး အကျိုးရလာဒ်ကောင်းတွေကိုပါ. . ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်. .
တစ်ပတ် အတွင်း ခရမ်းချဉ်သီး ခုနစ်ကြိမ် စားသုံးသူ သည် ဆီးကျိတ် ကင်ဆာ ဖြစ်နှုန်းကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ လျော့ချ စေနိုင်ပြီး ဆယ်ကြိမ်အထက်စား သူများဖြစ်ပါက ဆီးကျိတ်ကင်ဆာမှ လွတ် ကင်းနိုင်သည်ဟု သုတေသီတချို့က ဆိုသည်။ ခရမ်းချဉ်သီးတွင် ပေါပေါများများ ပါဝင်သည့် လိုင်ကော်ပင်းဓာတ် (Lycopene) သည် ကင်ဆာရောဂါများကို ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရာတွင် အားပြင်း သော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း Antioxidant ဖြစ်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ဆဲလ်များကို ကင်ဆာမကူးစက်အောင်နှင့် မပြောင်းလဲ မပျံ့နှံ့အောင်ကာကွယ်ပေး သည်ဟုဆိုသည်။ Antioxidant သည် အထူးသဖြင့် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ ဆီးအိမ် ကင်ဆာ၊ သားအိမ်ကင်ဆာနှင့် ကင်ဆာ ဖြစ်မည့် အမြုတေများကို တားဆီးပယ် ဖျက်ပေးနိုင်သည်။
Lycopene ဓာတ်သည် Heart Attack နှလုံးရပ်ဆိုင်းခြင်းကို ကာကွယ် တားဆီးပေးနိုင်ပြီး အူမကြီးကင်ဆာနှင့် လေဖြတ်ခြင်းကိုလည်း တားဆီးနိုင်သည် ဟုဆိုကြသည်။Lutein နှင့် Zeaxanthin ဓာတ်များပါဝင်ခြင်းကြောင့် မျက်စိ အမြင်ကို ကောင်းမွန်ကြည်လင်စေနိုင် ကြောင်း သုတေသီများက ပြောသည်။ ခရမ်းချဉ်သီးတွင် ဗီတာမင်ဘီဓာတ်၊ ဗီတာမင်စီ၊ မကောင်းသော LDL အဆီ ဓာတ်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သော HDL ကောင်းသောကိုလက်စထရောဓာတ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက် ရေးတွင် အရေးပါသော ဆိုဒီယမ်နှင့် ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်၊ သွေးနီဥထုတ်ပေးရာ တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဖိုလစ်အက် ဆစ်ဓာတ်က ကလေးငယ်များ ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးစေရန် မီးယပ်သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီး များ အရိုးပါးခြင်း၊ အရိုးဆက်ခြင်းမှ ကာ ကွယ်ပေးနိုင်သည့် ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်၊ အမျိုးသမီးများ အထူးလိုအပ်သည့် သံ ဓာတ်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့် နှလုံးခုန်မမှန် သူများအတွက် လိုအပ်သည့် မဂ္ဂနီစီယမ် ဓာတ်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့် ခရမ်းချဉ်သီးကို အစိမ်း စားခြင်း၊ ချက်ပြုတ်စားခြင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး ဆော့စ်ပြုလုပ်စားခြင်းဖြင့် အာဟာရမျိုးစုံ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Hidden Folder တွေကို ပြန်ဖေါ်ဖို့ Folder Option ပျောက်နေရင်
Maung Pauk at 1:37:00 PM 0
Folder တွေ အလိုလိုနေရင်းပျောက်တာ ကြုံဖူးကြမှာပါ.. ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အဖြစ်များပါတယ်.. ဗိုင်းရပ်စ်ကိုလည်း သတ်ပြီးပြီ.. ကိုယ့် Folder တွေလည်း ပြန်မမြင်ရသေးဘူး.. Folder Option နဲ့ ပြန်ဖေါ်မယ် လုပ်တော့ Folder Option က ပျောက်နေတယ်..
အဲဒီလို အဖြစ်အပျက်က ခဏခဏကြုံရတတ်ပါတယ်..
Start ထဲက Run ဆီကိုသွားပြီး Run box ထွက်လာတဲ့အခါမှာ gpedit.msc ကိုရိုက်ပြီး ok ပေါ့။
ကဲ ပေါ်လာတဲ့ box ထဲမှာမှ . . . .
User Configuration -> Administrative Template -> Windows Components -> Windows Explorer
ပေါ်လာတဲ့ Box လေးထဲမှ Removes Folder Options menu from Tools menu ကိုရှာလိုက်ပြီး Double Click လုပ်လိုက်ပါ
ထပ်ထွက်လာတဲ့ box ထဲက Disable ကိုရွေးလိုက်ပါ..
ကဲ့ အဲဒါတွေအားလုံးပြီးရင်တော့ ကျနော်တို့ Control panel ထဲမှာရော Tools ထဲမှာပါ Folder Options ပြန်တွေ့ ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ . .
Firmware Firmware တင်နည်း Huawei နည်းလမ်းများ
Huawei U8818 ICS 4.0.3တင်နည်းနှင့််ORIGINAL Firmware ပြန်တင်နည်း
Maung Pauk at 10:59:00 PM 0
Huawei U8818 ICS 4.0.3တင်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ORIGINAL Firmware ပြန်တင်ချင်ရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အောက်ကနည်းတိုင်းလုပ်ပါ့မယ်အခုပာာကတော့ ICS firmwar 4.0.3 တင်နည်းပါပထမဦးဆုံး u8818 ရဲ့ ICS firmware ဖိုင်ကိုအရင်ဒေါင်းရပါမယ်။
ICS firmware 4.0.3 ကိုဒီမှာဒေါင်းပါ
ပြီးရင် သင် ဒေါင်းထားတဲ့ zip ဖိုင် ကိုဖြည် လိုက်ပါ။dload ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုရပါလိမ့်မယ်။
ထို folder ထဲမှာ UPDATE.APP ဖိုင် ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယအရေးကြီးတာကတော့ Kingstom SD ကဒ် 2GB (or) 4GB တစ်ကဒ်လိုပါလိမ့်မယ်။
Firmware တင်ဖို့က အဓိက SD card ကောင်းကောင်းတစ်ကဒ်လိုတာပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင် firmware ဖိုင်ကို
ထည့်ထားပေမယ့် ဖုန်းက အလုပ်မလုပ်နိင်ခြင်း။ SD ကဒ်၏ စွမ်းဆောင်ရေ နည်းခြင်းကြောင့် ဖုန်း boot မှ SD card အား အတက်နေးခြင်း
စသည့် အခြေအနေများကြောင့် Firmware တင်လို့မရခြင်းအခြေ အနေများစွာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၁။သင့်ဖုန်းအား Power ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် သင့် SD Card အား ကွန်ပျူတာတွင် တပ်ကာ Format ရိုက်လိုက်ပါ။
၂။ သင် ခုနက zip ဖိုင်ဖြည် ချထားတဲ့ (UPDATE.APP) ပါတဲ့ dload folder အား SD Copy ကူးထည့် လိုက်ပါ။
၃။သင့်ဖုန်းတွင် SD ကဒ်ပြန်တပ်လိုက်ပါ။
၄။ သင် ဖုန်းအား ပါဝါ ဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီးရင် System Setting > Storage> Software Upgrade> SD card upgrade> Select “OK”
ပေးလိုက်ပါ။ Restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
၅။ ဘာမှလုပ်ပေးဖို့မလိုပဲ Firmware စတင်ပါလိမ့်မယ်။ Step 1> Step2 > Step3သူ့မှာသူအလိုလို အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
၆။ ပြီးရင် Restart ကျပြီး Boot ပြန်တတ်လာပါလိမ့်မယ်။ Recover mode ကိုသူ့မှာသူ ၀င်သွားပါလိမ့်မယ်။
၇။ Restart ထပ်ကျပြီး ပြန်တက်လာလျှင် သင့်ဖုန်း ICS ဖြစ်သွားပါပြီ။
အခုအောက်ကနည်းလမ်းကတော့ Original Firmware ပြန်တင်နည်းပါ
Original Firmware ကိုဒီမှာဒေါင်းပါ
အထက်မှာ ပြောထားတဲ့ နံပါတ် (၃) အဆင့်ထိ လုပ်သွားပါ။
၄။ ပြီးရင် သင့်ဖုန်းကို ပါဝါမဖွင့်ခင် Volum (+ ကော , – ကော)နှစ်ခုလုံးကိုဖိထားပါ။
၅။ ပြီးရင် ထိုနှစ်ခုလုံးကိုဖိထားပြီး POWER ခလုပ်ကိုပါ ထပ်ဖိထားပါ။ ထိုအချိန်မှာ နံပါတ်(၅) မှာရေးထားတဲ့အဆင့်တိုင်းအကုန်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကဲ အခုတော့ ကလိချင်တိုင်းကလိလို့ ရပါပြီဗျာ စိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့ပဲာပဲာ
Huawei Firmware Collection -9( Ascend - Series )
Maung Pauk at 9:58:00 PM 1
1. Huawei Ascend C8812 Firmware
C8812 V100R001C92B921(China Telecom)
C8812 V100R001C92B925(China Telecom)
2.Huawei Ascend D1 U9500 Firmware
Ascend D1-U9500-1 (Android 4.0.3) V100R001CHNC00B118(Generic Version)(Official Shipped Version)
Ascend D1 (U9500-1, Android 4.0) V100R001CHNC00B122 (Generic Version)
Ascend D1 (U9500-1, Android 4.0) V100R001CHNC00B126 (Generic Version)
3. Huawei Ascend G300C C8810 Firmware
C8810 V100R001C92B862(General Version)(05010TJJ)
4. Huawei Ascend P1 U9200 Firmware
U9200-1 V100R001CHNC00B113(China General)
Ascend P1 U9200-1 V100R001C00B213(Normal)(05010XWP)
Ascend P1 U9200-1 V100R001CHNC00B115(China General)
U9200-1 (Android 4.0.3)V100R001C185B103
Ascend P1 U9200-1 (Android 4.0)V100R001C00B219(Normal)(05010XWP)
Ascend P1 U9200-1 (Android 4.0) V100R001CHNC00B118(Generic Version)
5. Huawei U8185 AKA Ascend Y100 Firmware
U8185 (Android 2.3.6)V100R001C00B814CUSTC185D001(Europe)
6. Huawei Ascend Y200 U8655 Firmware
U8655-1 V100R001C169B880SP02(Germany O2)
ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ ကိုက်ညီတာတွေ ရနိုင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှာဖွေစုဆောင်းထားတာပါ..
Collection 10 ကို ဆက်လက်စောင့်မျှော်ပါရန်...
Huawei Firmware Collection -7( M - series )
Maung Pauk at 1:51:00 PM 0
1.Huawei Mediapad (S7-301w) Firmware
S7-301W V100R002C233B002(China Channel)(05011ASC)
S7-301W V100R001C233B019(China Channels)
S7-301w Android4.0 C232B001(General Channel)(05010BDG)
S7-301W (Android 4.0.3)V100R002C233B003(China Channel WIFI version)
2. Huawei Mediapad (S7-301c) Firmware
S7-301c V100R001C142B023(China Telecom)(05010AGD)
S7-301C (Android 3.2) V100R001C142B028(China Telecom)(05011AGD)
3. Huawei M865 AKA Ascend II Firmware
M865 V100R001C153B826b (US Cricket)
4. Huawei M860 AKA Ascend Firmware
M860 V100R001C153B251SP03(USA Cricket)
M860 V100R001C177B261(USA MetroPCS)
M860 V100R001C177B617(America MetroPcs)
M860 V100R001C177B652(USA MetroPCS)(05010MLU)
5.Huawei M835 AKA HWM835 Firmware
အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ ရရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်လျက်...
Huawei Firmware Collection -6 ( S- series )
Maung Pauk at 1:04:00 PM 1
1. Huawei S8600 Firmware
S8600 V100R001C92B140 (China Telecom)
2. Huawei S8250 Firmware
S8520 V100R001C92B011SP022 (China Telecom)
3. Huawei S7 Tablet Firmware
S7 V100R001C08B016(U.K. Dataselect)
S7 V100R001C15B023(Spain Orange)
S7 V100R001C28B015(USA BestBuy)
S7 V100R001C28B112(USA BestBuy)
S7 V100R001C32B015(Italy GIVI)
S7 V100R001C56B012(Indonesia XL)
S7 V100R001C57B113(Norway Telenor)
S7 V100R001C63B013(Sweden Expert)
S7 V100R001C70B112(Russia Channel)
S7 V100R001C13B115 (Australian Telstra)
S7-201u V100R001C106B013(South Africa MTN)
S7-201u V100R001C178B021(22)(Hungary T-Mobile)
S7-201u V100R001C197B012(Indonesia Telkomsel)
S7-201u V100R001C203B013(Indonesia Channel)
S7-201u V100R001C206B012 (Poland AB)
S7-201u V100R001C207B015(Hungary Invitel)
S7-201w V100R001C207B013(Hungary Invitel)
တစ်စုံတစ်ခုသော အကျိုးဖြစ်စေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်..
အပိုင်း (7) ဆက်လက်စောင့်မျှော်ပါရန်
Huawei Firmware Collection -5 ( T- series )
Maung Pauk at 11:29:00 AM 0
1. Huawei Ascend G305T T8828 Firmware
T8828 V100R001CHNC01B823(China Mobile)
Ascend G305T T8828 (Oms2.6)V100R001CHNC13B823(Jiangxi Mobile customized)
Ascend G305T T8828(Oms2.6)V100R001CHNC01B824(China Mobile)
2. Huawei T8600 Firmware
T8600 V100R001C01B016SP10 (Simplified Chinese)
3. Huawei T8500 Firmware
Huawei Firmware Collection -4( U- series )
Maung Pauk at 6:46:00 PM 0
1. Huawei U8150 AKA Ideos Firmware
U8150 V100R001C18B842(Kenya Safaricom)
U8150 V100R001C85B823SP01(USA TMO-Postpay)
U8150 V100R001C126B832SP04(India Tata)
U8150 V100R001C127B818SP05 (Hong Kong SmarTone)
U8150 V100R001C127B818SP05 (Pakistan Zong)
U8150 V100R001C203B823SP02(Belarus Velcom)
U8150 V100R001C206B823(Australia BP CJ)
U8150 V100R001C212B826SP03(Mexico Iusacell)
U8150 V100R001C238B832SP04(Indian TATA)
U8150 V100R001ITAC113B833SP02(Italy WIND)
U8150 V100R001TZAC112B845SP01(Tanzania Tigo)
U8510-1 V100R001C290B855(UK Tesco)(05010TDH)
U8510-1 V100R001C364B856(UK P4U)(05010TQN)
U8150 V100R001ARGC27B826(Argentina Movistar)
U8150 V100R001MEXC27B838SP02(Mexico movistar)
U8150 V100R001C02B827SP02(Italy Vodafone)
U8150 V100R001C02B827SP03(Italy Vodafone)
U8150 V100R001C126B832SP01(India Aircel)
U8150 V100R001C191B822(Australia channel sales)
U8150 V100R001C215B847(Thailand CAT)
U8150 V100R001C10B839SP03(Russia Channel)
U8150 V100R001C126B833(Italy WIND)
U8150 V100R001C185B825(Bulgaria Vivacom)
U8150 V100R001C253B836(Germany retail 2020)
U8150-92 V100R001C26B830(Japan Emobile)
U8150 V100R001C183B825(New Zealand 2degrees)
2. Huawei U8120 AKA Vodafone 845/V845/Joy Firmware
U8120 V100R001C02B264SP02(Greece Vodafone)
U8120 V100R001NZLC02B233SP02(New Zealand Vodafone)
V845 V100R001C02B221(Spain Vodafone)
V845 V100R001C02B223(Czech Vodafone)
V845 V100R001DEUC02B220(Vodafone German)
V845 V100R001GBRC02B226SP02(UK Vodafone)
V845 V100R001IRLC02B220SP02(Eire Vodafone)
V845 V100R001NLDC02B220(Holand Vodafone)
V845 V100R001NZLC02B233SP01(New Zealand Vodafone)
3. Huawei U8110 AKA T-Mobile Pulse Mini/ Pulse Mini/Selina Firmware
U8110 V100R001ARBC200B278(Arabic Etisalat)
U8110 V100R001C19B221(H3G HongKong)
U8110 V100R001C85B215SP02(TMO Holand)
U8110 V100R001C85B215SP02(TMO UK)
U8110 V100R001C86B219SP01(Spain Yoigo)
U8110 V100R001C157B229SP01(Hungary Redbull)
U8110 V100R001C188B253(Germany E-PLUS)
U8110 V100R001C17B239(China Unicom)(05010EJA)
4. Huawei U8100 Firmware
U8100-5 V100R001ARGC27B235(Argentina Movistar)
U8100-9 V100R001C98B239(Canada wind)
U8100-9 V100R001C141B238(USA CincinnatiBell)
U8100 V100R001C42B223SP01(Indonesia EXCELCOM)
U8100 V100R001C109B220(France Orange)
U8100 V100R001C138B220SP01(Austria H3G)
Huawei Firmware Collection -3( U-series )
Maung Pauk at 6:45:00 PM 0
1. Huawei U8350 AKA Boulder/Orange Barcelona Firmware
U8350 V100R001C00B625(Malaysia Only)
U8350 V100R001C00B626SP01(Kenya Normal)
U8350 V100R001GBRC224B623SP02(England Orange)
U8350 (Android 2.2)V100R001C101B626(France Bouygues)(05010PRF)
U8350 (Android 2.2)V100R001C306B631(France Audim)(05010QXW)
U8350 (Android 2.2)V100R001C344B660(France Free Mobile)(05010UMY)
U8350 (Android 2.2)V100R001C88B630(France Virgin)(05010QQK)
2. Huawei U8300 Firmware
U8300 V100R001AUSC34B271(Austrilia optus)
U8300 V100R001C09B261SP01(Poland P4)
U8300 V100R001C151B287(India Channel)
U8300 V100R001C15B278(Portugal OPTIMUS)
U8300 V100R001ITAC113B259(Italy Wind)
U8300 V100R001SWEC125B258(Sweden HI3G)
U8300 V100R001THAC208B263(Thailand TOT)
3. Huawei U8230 Firmware
U8230 V100R001ARBC144B836(Oman Omantel)
U8230 V100R001C00B831(Malaysia TENTEN)
U8230 V100R001C152B820(White Russia BeST)
U8230 V100R001C157B820(Austria MOBIKOM)
U8230 V100R001C191B839(Australia channel sales)
U8230 V100R001C191B839(Australia Roadhound)
U8230 V100R001C62B857(Zambia Airtel)
4. Huawei U8220 AKA Pulse Firmware
U8220 V100R001ARBC165B829(Morocco Meditel)
U8220 V100R001C05B820(Taiwan CHT)
U8220 V100R001C104B825(HongKong PCCW)
U8220 V100R001C32B820b(Venezuela Movilnet)
U8220 V100R001C85B826SP01 (T-Mobile UK)
U8220 V100R001GBRC85B116SP01 (UK T-Mobile)
U8220 V100R001GBRC85B118SP01(UK T-Mobile)
U8220-6 V100R001CHNC00B857(Chinese Channel)(05010HDP)
5. Huawei U8180 AKA Orange Stockholm/T-Mobile Rapport/Ideos X1/Gaga Firmware
U8180 V100R001C34B621 (Australia Optus)
U8180 V100R001C85B631 (UK TMO)
U8180 V100R001C102B625 (Sweden Tele2)
U8180 V100R001C356B658(India Idea)(05010TWA)
U8180 V100R001GBRC224B630 (UK Orange)
U8180 V100R001PRTC224B620 (Portugal Optimus)
U8180 V100R001C193B661 (Megafon Russian)
U8180 (Android 2.2)V100R001C00B665(Normal)
6. Huawei U8160 AKA Vodafone 858 Smart Firmware
U8160 V100R001C02B617 (GB Vodafone)
U8160 V100R001C02B617 (Germany Vodafone)
U8160 V100R001C02B617 (Ireland Vodafone)
U8160 V100R001C02B617 (Italia Vodafone)
U8160 V100R001C02B617 (Spain Vodafone)
U8160 V100R001C02B617(Greece Vodafone)
U8160 V100R001C02B617(Hungary Vodafone)
U8160 V100R001C02B620 (South Africa Vodafone)
U8160-U V100R001C02B617SP01 (Romania Vodafone)
U8160 V100R001C02B650 (UK Vodafone)(05010PTW)
မိမိ အမျိုးအစားအလိုက် အဆင်တပြေဖြစ်အောင် ရှာဖွေစုဆောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်..
Huawei Firmware Collection -2( U- series )
Maung Pauk at 6:45:00 PM 1
A. Huawei U8661 Sonic Plus Firmware
U8661 (Android 2.3) V100R001C17B827(China Unicom)(05010VVE)
B. Huawei U8660 Firmware
C. Huawei U8650 AKA Sonic/Turkcell T20 Firmware
U8650 (Android 2.3.3) V100R001C00B828SP03(general)
U8650 V100R001C05B859 (Taiwan)
U8650 V100R001C151B859 (India)
U8650 V100R001C151B863SP02(India Trench)
U8650 V100R001C17B856 (China Unicom) (05010TKR)
U8650 V100R001C223B826(Malaysia General)
U8650 V100R001C257B823SP03(Australia Channel)
U8650 V100R001C86B857 (Spain Yoigo 2.3.5)
U8650 V100R001C96B852 (Russia)
U8650-1 V100R001C121B828SP01(Turkey General)
U8650-1 (Android 2.3.6 )V100R001C169B865 (Germany)
U8650-1 V100R001C86B823SP05(Spain Yoigo)
D. Huawei U8520 Duplex Aka Huawei Deuce Firmware
U8520 V100R001C17B138 (China Unicom)
E. Huawei U8510 AKA Ideos X3/Blaze Firmware
U8510-1 V100R001C169B855(Germany O2)(05010RYN)
U8510-1 V100R001C306B851(France Audim)(05010TLF)
F. Huawei U8500 Firmware
U8500 V100R001C17B281 (China Unicom) (05010GHR)
U8500 V100R001C187B288 (China Unicom) HiQQ generic version no camera)
U8500 V100R001C00B273(Oversea normal)
U8500 V100R001C05B713 (TW Senao International v2.2)
U8500 V100R001C151B719(India Trench)
U8500 V100R001C191B269(Australia Brightpoint)
U8500 V100R001C230B259(Pakistan ufone)
U8500 V100R001C253B269SP02(Germany 2020)
U8500 V100R001C267B713SP01(Froyo)(Sudan I CONNECT)
U8500 V100R001C285B720(Spain Mundo-R)
U8500 V100R001C319B298(Shandong Unicom)(05010SEH)
U8500 V100R001C55B277(Italy TIM)
U8500 V100R001C00B761 (Normal)(05010NRX)
U8500 V100R001C151B719 (India)
U8500 (Android 2.1 Update 1)V100R001C96B257(Russian)
U8500 (Android 2.2.2)V100R001C24B722 (Omnitel)
U8500 (Android Multi)V100R001C00B705(Froyo Beta)
U8500 (Android 2.2.1)V100R001C278B712
ကဲ ကိုယ့်ဖုန်းအမျိုးအစားနဲ့ ကိုက်တာတွေ ဒေါင်းပြီး အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ...
အပိုင်း (၃) ဆက်လက်စောင့်မျှော်ပါရန်
Huawei Firmware Collection -1 ( U- series )
Maung Pauk at 4:54:00 PM 1
Huawei Firmware တွေကို ရသလောက်စုပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ဖုန်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာတွေအတွက် တစ်ခုခု အထောက်အကူရမလားလို့ပါ...
1. Huawei UM840 Firmware -
(a) UM840 V100R001C32B251
(b) UM840 V100R001C32B766SP02
2.Huawei U9000 AKA Ideos X6/Ascend X /Spice Mi410/Cherrymobile Magnum HD/Motorola Triumph/WellcoM A99 Firmware
(b) MAGNUM_softwareupdate3 FB0-318D-0-5019-A03
(c) U9000 V100R001C00B244SP00(normal)
(d) U9000_Android_2.2_V100R001C322B259SP00 (China Channel)
(e) U9000-81 V100R001C258B245SP10(USA CBW)
3. Huawei U8860 AKA Honor Firmware
U8860 V100R001C00B909SP02 (female subject Customised)
U8860 V100R001C17B866b (China Unicom)
U8860 V100R001C00B977 (China)
U8860 V100R001C394B865SP01(Malaysia Only)
U8860 V100R001CHNC00B876 (Chinese channels)
U8860 ICS 4.0 Cambodia Demo version
Huawei Honor Ice-Cream Sandwich (4.0.3) firmware (Malaysia Version) (TRIAL VERSION)
U8860 V100R001C17B923SP03(China Unicom customized version)
U8860 V100R001CHNC00B923SP03 (Chinese channels)
U8860 (Android 2.3.6)V100R001C29B879 (Mobitel)
U8860 (Android 2.3.6)V100R001DEUC00B870(Normal West Europe)(05010VWP)
U8860 (Android 4.0.3)V100R001C00B922
U8860-I (Android 4.0.3)V100R001C00B923SP01
4. Huawei U8850 AKA Vision Firmware
U8850 V100R001CHNC00B307SP16 (female subject Customised)
U8850 V100R001C10B244SP22(Russia Channel)
U8850 V100R001C223B244SP15(Malaysia Only)
U8850 V100R001CHNC00B244SP22 (Chinese channels)
U8850 – SFC-244F-0-8019-A03 (Australian Channel)
U8850-91 V100R001C111B236SP16(Japan softbank)
U8850 V100R001CHNC00B307SP20(Chinese Channel)
U8850 (Android 2.3.7) SFC-244M-0-8021-A03
U8850 (Android 2.3.5)V100R001CHNC00B243SP25(China channels)
U8850 (Android 2.3.5)V100R001CHNC00B244SP15 (Chinese channels)
U8850 (Android 2.3.7)V100R001C279B244SP22(Slovenia TUS Mobil)
5.Huawei U8800Pro AKA Ideos X5 Pro Firmware
U8800Pro V100R001C00B026CUSTC102D001(Lithuania Tele2)
U8800Pro V100R001C00B540G001 (Universal) (Gingerbread)
U8800Pro V100R001C00B572G001 (Universal) (Gingerbread)
U8800Pro (Android 2.3)V100R001C00B521(Oversea Normal)(05010TXB)
U8800pro (Android 4.0)V100R001C00B926(Normal)(Unofficial Release Version)
U8800pro (Android 4.0)V100R001CHNC00B926(Domestic General)(Informal shipped version)
U8800pro (Android 4.0.3) V100R001C00B927(Normal)
U8800Pro (Android 4.0.3) V100R001CHNC00B927(Domestic General)
6. Huawei U8800 AKA Ideos X5/Huawei Titan/U8800H Firmware
U8800 V100R001C00B138SP04CUSTESTC205D001(Esthonia Elisa)
U8800 V100R001AREC00B135SP01(oman Omantel)
U8800 V100R001C00B133SP15(UK Carphone)
U8800 V100R001C00B135SP01 (Germany)
U8800 V100R001C00B135SP01CUSTC183D001(New Zealand 2degrees)
U8800 V100R001C00B135SP01CUSTC230D001(Pakistan Ufone)
U8800 V100R001C00B135SP01CUSTC240D001(UK Carphone)
U8800 V100R001C00B135SP01CUSTC257D001(Australia Roadhound)
U8800 V100R001C00B136(Overseas General version)
U8800 V100R001C00B136SP02CUSTC205D001(Finland Elisa)
U8800 V100R001C00B136SP02CUSTC264D001(Turkey Channel)
U8800 V100R001C00B136SP03CUSTC151D002(India Channel)
U8800 V100R001C00B517G001 (Beta1.0)(Overseas Normal)(Gingerbread)
U8800 V100R001C00B518G001 (Beta1.0)(Overseas Normal)(Gingerbread)
U8800 V100R001C17B160CUSTC17D002 (China Unicom)
U8800 V100R001C17B162CUSTC17D001 (China Unicom)
U8800 V100R001C17B517G001 (Gingerbread Experience Edition)
U8800_Android 2.3 V100R001C00B526G001(Normal)
U8800_Android 2.3 V100R001C00B528G001 (Universal)
U8800H V100R001AREC00B135SP01 CUSTC213D001(Kuwait VIVA)
U8800H V100R001C00B138SP01CUSTC38D001(Malaysia Maxis)
U8800H V100R001HKGC104B153(HongKong PCCW)
U8800-51 V100R001C00B035CUSTC32D001 (Venezuela Movilnet)
အပိုင်း (၂)အား ဆက်လက်စောင့်မျှော်ပါရန်.....
ဝမ်းချုပ်တတ်သူများအတွက် ဝမ်းပုံမှန်သွားစေမည့် နည်းလမ်းများ
Maung Pauk at 3:24:00 PM 0
ဝမ်းချုပ်တဲ့အခါ စွမ်းအင်မဲ့နေသလိုလို၊ ဗိုက်ပြည့်နေသလိုလို၊ လေပွနေသလိုလို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်တာဟာ သင်စားတဲ့ အစားအသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ပမာဏနဲ့ အူအလေ့အထအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတဲ့အချက်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ လူတိုင်းလိုလို ဘဝမှာ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် လောက်တော့ ခံစားရတတ်တဲ့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းဟာ သက်သောင့်သက်သာ မရှိစေတဲ့အတွက် နေ့စဉ်ဝမ်းပုံမှန် သွားစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်ဟာ ဝမ်းကို ပျော့ပျောင်းကာ မှန်မှန်သွားစေပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံနဲ့ ကောက်နှံထဲမှာ အမျှင်ဓာတ် ပါဝင်မှုများတဲ့အတွက် ထမင်းစားတိုင်း ထည့်စားပေးပါ။ ပီဇာ၊ ရေခဲမုန့်၊ အသား၊ အာလူးချောင်းကြော်နဲ့ အဆင်သင့်မုန့်တွေမှာ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းတဲ့အတွက် လျှော့စား ပေးပါ။ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ အသီးတွေက ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ဆီးသီးတွေဖြစ်ပြီး ဟင်းနုနယ်၊ မုန်လာဥနီလို ဟင်းသီးဟင်းရွက် တွေထဲမှာလည်း အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့အစားအသောက်တွေကို ကြေညက်အောင် ဝါးစားဖို့နဲ့ တစ်ကြိမ်စားရင် နည်းနည်းနဲ့ မကြာခဏစားဖို့လိုပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်နေရင် ဝမ်းချုပ်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ရေနဲ့သစ်သီးဖျော်ရည်တွေ သောက်ပေးပါ။ ကဖင်းနဲ့ အယ်လ်ကိုဟော ပါတဲ့ အရည်တွေက ရေငတ်ခြင်းနဲ့ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် မသောက်သင့်ပါ။
ပုံမှန် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုဟာ အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာကာ အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့မှာ မိနစ် ၂၀-၃၀ လောက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပေးရုံနဲ့ ပုံမှန် ဝမ်းသွားမှာပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အချက်ပေးသံကို ဂရုမစိုက်ဘဲ အလုပ်များနေတဲ့သူတွေက ဝမ်းချုပ်ခြင်း ပိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းသွားချင်စိတ် ပေါ်လာတာနဲ့ အိမ်သာထဲ သွားပါ။ သင်ဟာ နံနက်ခင်းတိုင်း ဝမ်းသွားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိရင် အဲဒီအချိန်အတွင်း အိမ်သာထဲ သွားထိုင်ပါ။ ဒါဟာနေ့စဉ် ပုံမှန်ဝမ်းသွားတဲ့ အကျင့် ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ရာ ရောက်ပါတယ်။
သင်ဟာ ယာယီဝမ်းချုပ်တာဆိုရင် ဝမ်းနုတ်ဆေးသုံးဖို့ မလိုပါဘူး။ ဘဝနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲလိုက်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ အကြာကြီးဝမ်းချုပ်နေတာဆိုရင်တော့ ဝမ်းနုတ်ဆေး သုံးသင့်၊ မသုံးသင့် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
တချို့ဆေးဝါးတွေဟာ ဝမ်းချုပ်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါ သင်မှီဝဲနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေကိုပါ အသိပေးဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။
.NET Framework ဆိုတာဘာလဲ
Maung Pauk at 2:09:00 PM 0
.NET Framework ဆိုတာဘာလဲ ?
.NET Framework ကိုစတင်ရေးသားခဲ့တာ Microsoft Company ဖြစ်ပါတယ်...
Net ဆိုတာ Microsoft ကနေ Software Application တွေ၊ Web Service တွေကို Develop လုပ်လို့ရအောင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ Platform ပါ။ အဲဒီ .Net က Programming Language အမျိုး ၂၀ လောက် ကို Support လုပ်ပါတယ်။ Dotnet က Support လုပ်တဲ့ထဲမှာ Microsoft Language တွေဖြစ်တဲ့ (C#.Net, Visual Basic.Net, C++.Net, Jscript.Net,ASP.Net ) တို့အပြင်တစ်ခြား Third Party Language တွေဖြစ်တဲ့ (Component Pascal(QUT), COLBOL, Fortran, Pearl, Python) အစရှိတဲ့ Language တွေကိုပါ Support လုပ်ပါတယ်။
အခုပြောတာက .NET အကြောင်းပါ... .NET Framework အကြောင်းမဟုတ်သေးပါဘူး.. ဒါအစပေါ့
သူ့တစ်ယောက်တည်း ဘာမှ လုပ်လို့မရပါဘူး... သူတို့က Keywords တွေ Class တွေသာဖြစ်ပါတယ်.. Keyword ဆိုတာ .NET Framework နဲ့တွဲရေးမှသာ
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Programs ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ဒီနည်းက အရမ်းကို အခြေခံ ကျပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲ့နည်းနဲ့ စစ်ရင် တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ့်စက်မှာ .NET Framework ရှိနေလျက်နဲ့ Add or Remove Programs ထဲမှာ မတွေ့တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
အဲ့အတွက် သူ့ထက်ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုစီ ကျွန်တော်တို့ ချဉ်းကပ်ကြည့်ပါမယ်။ နည်းက free လည်းရပြီး portable လည်း ဖြစ်တဲ့ .NET Version Detector ကို အသုံးပြုဖို့ပါ။ သူက အသုံးပြုရလည်း လွယ်ကူပြီး သူ့ကို Run လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်စက်မှာ installed လုပ်ဆောင်ပြီးထားတဲ့ .NET Framework versions တွေကိုရော Hard drive ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ရှိတယ် ဆိုတာကိုပါ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
Source : 1. http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
3. Myanmar Tutorial